Weriye Kilwe Aadan oo xabsiga laga sii daayay | KEYDMEDIA ONLINE
11 April 2021 CCWarame: “Waxay indhuhu hayaan Madaxda Federaalka ee xilkoodu dhamaaday”
Weriye Kilwe Aadan oo xabsiga laga sii daayay
Weriye Kilwe Aadan Faarax oo ku dhawaad 90 cisho u xirnaa maamulka Puntland ayaa maanta dib u helay xorriyaddiisa.
GAROWE, Soomaaliya – War ka soo baxay Madaxtooyada Puntland ayaa lagu sheegay in xeer Madaxweyne lagu cafiyay wariye Kilwe Aadan, isla markaana wixii maanta ka danbeya uu yahay xor.
“Madaxweynaha Puntland wuxuu cafis Madaxweyne oo gaar ah u fidiyey Xukunsane Kilwe Aadan Faarax, Xeerkani wuxuu dhaqan geleyaa markuu Madaxweynuhu saxiixo, wuuna saxiixay.” Ayaa lagu yiri war ka soo baxay Madaxttoyada Puntland.
Ciidanka amaanka ayaa xiray Kilwe 27-kii December 2020, kadib markii uu soo tebiyay dibad-bax looga cabanayey sicir-bararka lacagta shilinka Soomaaliga ee ka dhacay degaanada Puntland.
3 March 2021, ayay ahayd markii maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Dowlad goboleedka Puntland ay saddex bilood oo xarig ah ku xukuntay Wariye Kilwe oo markaa in ka badan 60 cisho ku jiray xabsi sharci darro ah.
Puntland waxay kamid tahay degaanada Soomaaliya kuwa loogu dhibaateyn badan yahay wariyeyaasha, iyadoo lagu caburiyo xoriyadda hadalka iyo warbaahinta madaxa-banaan.
CCWarame: “Waxay indhuhu hayaan Madaxda Federaalka ee xilkoodu dhamaaday”